चिलिमेले ढिलो गरि सच्यायो बुक क्लोज मिति, कम्पनीको नयाँ बुक क्लोज मिति कहिले ? - samayapost.com
चिलिमेले ढिलो गरि सच्यायो बुक क्लोज मिति, कम्पनीको नयाँ बुक क्लोज मिति कहिले ?
समयपोष्ट २०७४ असोज २७ गते ७:४२
चिलिमे जलविद्युतले पुरानो बुक क्लोज मिति सच्याएर कात्तिक ६ गतेदेखि हुने गरि नयाँ मिति सार्वजनिक गरेको छ । बुक क्लोजको मिति सात दिन अगावै सार्वजनिक गनुपर्ने नीति विपरित कम्पनीले छोटो अवधि दिएर मिति सार्वजनिक गरेको भन्दै लगानीकर्ताहरुले विरोध गरेपछि कम्पनीले नयाँ मिति तय गरेको हो ।
कम्पनीले मिति सारिएको जानकारी ढिला गरि दिएको हो । कम्पनीले यसअघि असोज २७ गते सेयरधनी किताब बन्द गर्ने मिति तोकि नेप्सेमा असोज २७ गतेमात्र सूचना दिएको थियो । यही आधारमा कम्पनीको सेयरमा विहीवार उच्च आकर्षण देखिएको थियो भने ७ करोड २० लाखको सेयर किनबेच भएको थियो । विहीवार कम्पनीको सेयर मूल्य भने प्रतिकित्ता १० रुपैयाँसम्म घटेको थियो ।
कम्पनीले पुरानो बुक क्लोज मिति सच्याएपछि घोषणा गरेको २५ प्रतिशत लाभांश प्राप्त गर्न सेयर किन्न चहानेले अझै केही समय पाएका छन् । कात्तिक ५ गतेसम्म सेयर स्वामित्व हुनेले अब कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांश प्राप्त गर्नेछन ।
कम्पनीले १५ प्रतिशत बोनस सेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको कात्तिक २४ को साधारण सभाले पारित गरेपछि यो लाभांश लगानीकर्ताले पाउने छन् ।